Tonga ho an'ny mpamorona | ny iPad Pro 2018 vaovao Famoronana an-tserasera
Ny iPad Pro 2018 vaovao ho takelaka vaovao ho an'ny endrika
Omaly Apple dia namoaka ny kinova roa an'ny iPad Pro, takelaka manamboatra sy manintona amin'ny fomba mahafinaritra be. Takelaka iray tonga lafatra ho an'ny mpamorona, araka ny ahafantarantsika araka ny filazanao.
Ary toy ny mahazatra ny vokatra avy amin'ny orinasa amerikana dia tsy fohy ny vidiny. Takelaka iPad Pro 2018 tonga lafatra ho an'ireo mpamorona izay tsy mijery ny vidiny ary te hanana fitaovana mahafinaritra amin'ny lafiny rehetra.
Takelaka iray izay mampiasa ny fahafaha-mivezivezy sy ny fahaizany miovaova mba ho lasa vokatra tsara ho an'ny mpamorona. Tsy izany koa ny Apple Pencil, izay tonga amin'ny vidiny 135 euro ary izy io dia fanatsarana namboarina tamin'ny maodely teo aloha, miaraka amina latency tsara kokoa ary mikasika voajanahary kokoa.
Amin'izany Apple Pencil izany ianao dia afaka manoritra sy mamolavola eo amin'ny efijery an'ny iPad Pro 2018 izay mety ho 11 na 12,9 santimetatra arakaraka ny maodely voafidin'izy roa. Fampisehoana vahaolana 264ppi miaraka amin'ny teknolojia Liquid Retina sy 2388 x 1688 vahaolana. Saika afaka hiteny isika fa ho an'ny mpamorona dia saika ilaina ny mihazona ny Apple Pencil hiaraka amin'ny iPad Pro 2018.
Takelaka iray mamoha amin'ny alàlan'ny Face ID ary izany dia manana ny tsinainy ny chip 12 nanometer A7X Bionic, CPU 8-core misy GPU na sary 7-core. Iray amin'ireo vaovao lehibe indrindra ny hoe Apple dia nilefitra ihany tamin'ny seranan-tsambo USB-C mba hanilika ny seranan-tsambo Lightning. Ity dia hanokatra traikefa fifandraisana hafa ho an'ny iPad ary azo antoka fa ho fangatahana lehibe amidy izany.
Azonao atao izao ny mitahiry ny iPad Pro 2018 amin'ny vidiny ny maodely mora indrindra miaraka amin'ny WiFi misy 878 euro, raha ny lafo indrindra dia mahatratra hatramin'ny 2.099 euro miaraka amin'ny efijery 12,9-inch 4G ary fahatsiarovana ao anaty 1TB. Tsy misy na inona na inona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ny iPad Pro 2018 vaovao ho takelaka vaovao ho an'ny endrika
Emoji vaovao 158 nampiana an'i Apple: mena mena, maherifo ary maro hafa
Apple dia namolavola ny logo ho an'ny fivarotana voalohany ao Thailand